संक्रमितसंगै आएका १० मध्य ६ युवा आइसोलेनमा, थप ४ को खोजी जारी « Farakkon
तुलसीपुर, चैत २३ । कैलालीका कोरोना संक्रमित २१ वर्षीय युवासँगै आएका दाङका दश युवा मध्य ६ युवा आइसोलेनसमा आएका छन्। स्थानीय प्रहरी प्रशासनले उनीहरुलाई खोजेर आइतवार साँझ तुलसीपुरको बेलझुण्डीस्थित कोरोना विषेश अस्पतालमा ल्याएरआइतवार साँझ राखेको हो ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द्रप्रशाद रिजालले घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ का २२ बर्षीय टिकाराम रोका, सोहीठाउँकै २२ बर्षीय पदमकुमार रोका, २९ बर्षीय दिपक पुन, २६ बर्षी मोहन रोका र १७ बर्षीय जीवन रोका र बबई गाउँपालिका वडा नं. २मा घर भई तुलसीपुर बजारमा बस्दै आएका १९ बर्षीय दशरथ परियारलाई कोरोना विषेश अस्पतालमा राखिएको जानकारी दिए ।
अब लमही नगरपालिका वडा नं. ५ का २० बर्षीय शेरबहादुर कुमाल, सोही ठाउँका २५ बर्षीय रमेश मल्ल र देउखुरीकै राजपुरगाउँपालिका वडा नं. ७ का २६ बर्षीय अमर कुमाल र सोही ठाउँका १९ बर्षीय रामसागर थारुलाई ल्याउन प्रयास भइरहेको रिजाललेबताए ।
रिजालले सबै सम्पर्कमा आइसकेको र टाढा भएका कारण उनीहरुलाई पनि ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । सबैलाई खोजेर तुलसीपुर बेलझुण्डीस्थित कोरोना विषेश अस्पतालको आइसोलेनसमा राखिने प्रजिअ रिजालले बताए । सकभर सोमवार नैसबैको स्वाब संकलन गरि परीक्षणका लागि पठाउने प्रजिअ रिजालले जानकारी दिए ।
उनीहरु सबै जना चैत ११ गते गौरीफन्टा नाका हुँदै स्वदेश फर्किएका थिए । उक्त दिन उनीहरु कैलालीका कोरोना संक्रमित युवासंगैआएका थिए ।
त्यसदिन गौरीफन्टा नाकामा झन्डै एक हजार जना नेपालीको भिड थियो । प्रहरीले रोकेपछि घर आउन पाउनु पर्ने भन्दै त्यहाँ नारावाजी रपर्दशन समेत भएको थियो ।